मैलुङ खोला जलविद्युतले आईपीओ निष्काशन हुँदै, कति कित्ता आउँदै ? - UjyaloNepal
२०७८ असार २५ गते, शुक्रबार प्रकाशित
मैलुङ खोला जलविद्युतले आईपीओ निष्काशन हुँदै, कति कित्ता आउँदै ?
काठमाडौं । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति पाएको छ ।
कम्पनीलाई ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरबको आईपीओ निष्काशनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको हो । बोर्डले ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता आईपीओ निष्काशनका लागि असार २३ गते अनुमति दिएको हो ।
कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् काठमाण्डौं – युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले बिहीबारदेखि बिक्रीमा ल्याएको आईपीओमा पहिलो दिन नै १.४२ गुणा बढी आवेदन परेको छ।
बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको आइपीओमा बिहीबार बेलुका ५ बजेसम्ममा ४ लाख ६१ हजार ३५६ जना आवेदकबाट ८२ लाख ४७ हजार ८८० कित्ता शेयर खरिदको लागि आवेदन परेको छ। जुन कम्पनीले बिक्रीमा ल्याएको आईपीओको १.४२ गुणा धेरै हो।
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको आईपीओ बिहीबार देखि सार्वजनिक गरेको छ ।
कम्पनीले जारी पुँजी २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमध्ये ३० प्रतिशत रकमबराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो। जसअनुसार कम्पनीले १०० अंकित दरका कुल ६४ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ।
युनियन लाइफको शेयर पाउन पनि भाग्यकै भर,पहिलो दिन १.४२ गुणा बढी पर्यो आवेदन ?
मुसिकोटमा कोरोना संक्रमण दर कायमै, आज थप ३ जनामा संक्रमण पुष्टि
तेह्रथुम पावरको आइपीओमा बाँडफाँड मिति सार्बजनिक
खुसीको खबर, अर्को कम्पनीको आइपीओ निस्कासन हुँदै, कहिले र कति ?